1 Samuel 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
3 N’oge ahụ niile, nwa okoro ahụ bụ́ Samuel nọ na-ejere Jehova ozi+ n’ihu Ilaị, okwu Jehova+ kọkwara ụkọ n’oge ahụ;+ a dịghị ahụkarị ọhụụ.+ 2 O wee ruo otu ụbọchị na Ilaị dina n’ebe ọ na-edina, anya ya amalitewokwa ịhụ inyoghi inyoghi;+ o nweghị ike ịhụ ụzọ. 3 E menyụbeghị oriọna Chineke, Samuel dinakwa n’ụlọ nsọ+ Jehova, bụ́ ebe igbe Chineke dị. 4 Jehova wee kpọọ Samuel. O wee sị: “Lee m.”+ 5 O wee gbakwuru Ilaị, sị: “Lee m, n’ihi na ị kpọrọ m.” Ma ọ sịrị: “Akpọghị m gị. Gaghachi dinara ala.” O wee gaa dinara ala. 6 Jehova wee kpọọ òkù ọzọ, sị: “Samuel!”+ Samuel wee bilie gakwuru Ilaị, sị: “Lee m, n’ihi na ị kpọrọ m.” Ma ọ sịrị: “Akpọghị m gị, nwa m.+ Gaghachi dinara ala.” 7 (Ma Samuel amarabeghị Jehova, a malitebeghịkwa ikpughere ya okwu Jehova.)+ 8 Jehova wee kpọọ òkù ọzọ nke ugboro atọ, sị: “Samuel!” O wee bilie gakwuru Ilaị, sị: “Lee m, n’ihi na ọ ghaghị ịbụ na ị kpọrọ m.” Ilaị wee malite ịghọta na ọ bụ Jehova na-akpọ nwa okoro ahụ. 9 N’ihi ya, Ilaị sịrị Samuel: “Gaa dinara ala, ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ọ kpọọ gị, ị ga-asị, ‘Kwuwe, Jehova, n’ihi na ohu gị na-ege ntị.’” Samuel wee gaa dinara ala n’ebe ọ na-edina. 10 Jehova wee bịa guzoro n’ebe ahụ kpọọ òkù otú o si kpọọ n’oge ndị nke ọzọ, sị: “Samuel, Samuel!” Samuel wee sị: “Kwuwe, n’ihi na ohu gị na-ege ntị.”+ 11 Jehova wee gwa Samuel, sị: “Lee! O nwere ihe m ga-eme+ n’Izrel, nke onye ọ bụla nụrụ ya, ntị ya abụọ ga-azụ wuruwuru.+ 12 N’ụbọchị ahụ, m ga-emezu n’isi Ilaị ihe niile m kwuru banyere ụlọ ya, site ná mmalite ruo ọgwụgwụ.+ 13 Gwa ya na m na-ekpe ụlọ ya ikpe+ ruo mgbe a na-akaghị aka n’ihi njehie nke ọ maara,+ n’ihi na ụmụ ya na-akọcha Chineke,+ ọ baghịkwara ha mba.+ 14 Ọ bụkwa ya mere m ji ṅụọ iyi megide ụlọ Ilaị na àjà ma ọ bụ onyinye agaghị egbochi ntaramahụhụ a ga-enye maka njehie ụlọ Ilaị ruo mgbe a na-akaghị aka.”+ 15 Samuel wee dinara ala ruo ụtụtụ. O wee meghee ọnụ ụzọ nke ụlọ Jehova.+ Ụjọ na-atụkwa Samuel ịkọrọ Ilaị banyere ọhụụ ahụ.+ 16 Ma Ilaị kpọrọ Samuel, sị: “Samuel, nwa m!” O wee sị: “Lee m.” 17 O wee sị: “Gịnị bụ ihe ọ gwara gị? Biko, ezochirila m ya.+ Ka Chineke mee gị otú a, ka ọ tụkwasịkwa ihe na ya+ ma ọ bụrụ na i zochiere m ihe ọ bụla n’ime ihe niile ọ gwara gị.” 18 Samuel wee gwa ya okwu ahụ niile, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla o zochiiri ya. O wee sị: “Ọ bụ Jehova kwuru ya. Ihe ọ bụla dị ya mma n’anya, ya mee.”+ 19 Samuel nọ na-etolite, Jehova nọnyekwaara ya,+ o meghịkwa ka okwu ya ọ bụla daa n’ala.+ 20 Izrel dum malite na Dan ruo na Bia-shiba+ wee mara na Samuel bụ onye e nyere ikike ịbụ onye amụma Jehova.+ 21 Jehova wee pụta ìhè ọzọ+ na Shaịlo, n’ihi na Jehova kpugheere Samuel onwe ya na Shaịlo site n’okwu Jehova.+